HomeTurkeyCentral Anatolia Region42 KonyaUragbọ okporo Eurasia na 2021 maka Oge izizi na Konya
09 / 10 / 2019 Levent Elmastaş 42 Konya, Central Anatolia Region, ụgbọ okporo ígwè, eme, General, Isi akụkọ, Turkey 0
eurasia train maka oge izizi na konyya
Hyva Group na-haziri na Turkey "International Okporo ígwè, Light Okporo ígwè na lọjistik Fair" - Eurasia okporo ígwè n'etiti xnumx'uncu nke March 9 3-5 ga-ẹkenịmde ke TUYAP Fair Center na Konya. E gosiputara ngosi a, nke emere na İzmir ruo taa, na nnọkọ ndị nta akụkọ na Konya.
Na-atụle otu n'ime ndị kasị ibu na nke kasị mkpa nke atọ kasị ukwuu na okporo ígwè ngosi na ụwa, Hyva Group, haziri ahazi nke International Railway na Turkey, Light Okporo ígwè na lọjistik Fair - The preparations maka Eurasia Okporo ígwè xnumx'uncu, Konya Metropolitan Municipality na State Railways Directorate (TCDD) nke ndị ọrụ usoro ahụ gbasoro n'ike n'ike. Onye isi obodo Mịnịsta Konya Uğur İbrahim Altay, onye isi njikwa TCDD Ali İhsan Uygun na onye isi ọhụụ Hyve Group Mpaghara Kemal Ülgen gara mmemme nnabata a.
Onye isi nchịkwa TCDD Ali İhsan Uygun, onye kwuru okwu mbụ na ememe protocol ahụ, kwuru na ngosipụta ahụ bụ ohere dị mkpa iji soro mmepe nke teknụzụ na ụlọ ọrụ okporo ụzọ. . Maka ebumnuche a, Eurasia Rail Fair mbụ, nke e guzobere site na nkwado nke nzukọ anyị, mere na Ankara na 2011, na Istanbul na Istanbul, na Izmir na 2019. Ihe ngosi a, nke anyi huru dika ohere diri anyi iji soso teknụzụ na-apụta apụta na ụlọ ọrụ ụgbọ oloko na-etolite n'ike n'ike n'ụwa, na-emepe ọnụ maka iso na mba ndị ọzọ dị ka TCDD soro ya na-emekọrịta ihe.
TCDD General Director Ali Ihsan kwesịrị ekwesị, e dekọrọ na ụwa, nke bụ nke atọ kasị ukwuu ngosi na inye onyinye iji mmepe nke Turkey si n'ọdụ ụgbọ okporo oru Eurasia Okporo ígwè Trade nke na ọ dị mkpa maka ha ka ha ghara igosi na Konya na 9 nke xnumx. Si.
Uygun kwuru, olarak Dị ka Railways, anyị gara n’ihu itinye ego na Konya ma nweta ọhụụ na ọhụụ na ebumnuche anyị. Ruo taa, enweghị ike igosipụta ụgbọ okporo ígwè nke ndị na-emepụta ụgbọ ala na-eme n'ihi na enweghi njikọ nke ụzọ ụgbọ okporo ígwè na Ankara, Istanbul na Izmir. Ọchịchọ kasịnụ nke ndị bịaranụ bụ na ha chọrọ iji ụgbọ okporo ígwè na-ebu ngwaahịa ha. N'oge a, Konya dị anyị mkpa karịa. Konya fairground dị nso na Kayacık Logistics Center dị ka 5 km. Maka usoro ụgbọ okporo ígwè 2021 Eurasia, a ga-ebuga ụgbọ okporo ígwè na ọdụ ụgbọ oloko ahụ site na ụgbọ oloko site na ebe a gaa n'okporo ụzọ dị mma site na ụzọ na imekọ ihe ọnụ na Munya Metropolitan. Achọrọ m ka ebinye aka n’akwụkwọ iwu anyị n’etiti anyị na Konya Metropolitan Municipality maka mmezu nke iteghete Eurasia Rail Fair na Konya, ana m ekelekwa gị maka itinye aka gị. ”
N’icheta na Konya abụrụla ihe dị mkpa na Anatolia n’oge na-adịbeghị anya n’etiti usoro ọrụ ụgbọ okporo ígwè na usoro ụgbọ okporo ígwè na Konya ga-eme ka ọnọdụ a sikwuo ike, Kemal Ülgen, Onye Nchịkwa Mpaghara nke Hyve Group, kwuru na 2 ga-eme na Konya n'okpuru ụkpụrụ nke aka na October. kwuru na mpaghara ahụ ga-ezute ndị nnọchi anya mpaghara na ndị si mba ọzọ. Ülgen gara n'ihu: "Kemgbe 9, Eurasia Rail, nke na-enye ohere azụmaahịa ọhụụ site na idobe mpaghara niile na Eurasia Region, na-akpọkọta ndị na-eme ihe nkiri kachasị mkpa na mpaghara usoro ụgbọ oloko na mpaghara ahụ, ndị Konya mepere emepe ga-abụkwa ndị ọbịa. Ihe ngosi a bụ nke Istanbul, Ankara na Izmir mechara kwado ya. Ọ dị ezigbo mkpa ka anyị niile ghọta na Konya, nke na-aga n'ihu n'ụzọ ya na nzọụkwụ ndị doro anya iji wee bụrụ obodo ngosi dị mma. N'oge ngosi a, ndị sonyere mba ụwa nke mpaghara ahụ ga-azụlite azụmaahịa na mmekọrịta, anyị ga-eso ndị na - eso ya wee kesaa ihe ọmụma na ahụmịhe na ọkwa kachasị elu site na mmemme na nzukọ ọmụmụ ihe. "
Hyva site Group ga-ẹkenịmde xnumx'unc ugboro n'afọ 2021 n'etiti Trade akwado TC Ministry of Commerce nke Republic of Turkey State Railways (TCDD), Konya Metropolitan Municipality, KOSGEB na International Union of Railways (UIC) na-gụnyere.
Emere 8 na Izmir. Turkey bụkwa n'etiti ha Qatar, Algeria, Czech Republic, China, France, Netherlands, sonyere na mba ndị dị ka Spain na Italy ama nabatara
9. Eurasia Erasia 2021 ga-adịrịrị na Konya! .. Ndị bịanyere aka n'akwụkwọ 04 / 10 / 2019 Ebinyela aka n'akwụkwọ n'etiti Konya Metropolitan Municipal na General Directorate of State Railways (TCDD) gbasara nzukọ nke 9 nke International Railway, Light Rail Systems, Infrastructure and Logistics Fair (EUROASIA RAIL) na 3-5 March 2021. Mgbe ọ na-ekwu okwu na mmemme mmemme, Onye isi obodo nke Konya Metropolitan Municipal Ugur Ibrahim Altay, Konya akwadola ọtụtụ ndị otu mba na nke ụwa na oge ikpeazụ, na-ekwupụta na ha bịanyere aka na protocol ahụ na March 2021 ga-abịanye aka na nzukọ dị oke mkpa. N’imesi ike na Konya abụwo obodo nwere ngalaba n’ọdụ ụgbọ mmiri kemgbe gara aga, Mayor Altay kwuru, şehir Obodo nke na-eji ụgbọ ala mbụ na Anatolia…
2014 na 2 Eurasia Rail. ugboro French French Stand 28 / 02 / 2014 2014 na 2 Eurasia Rail. Ozugbo French National Guzosie: FAIVELEY na nkwado nke Transport na Bureau Veritas, Istanbul UBIFRANCE (France Commercial Ndụmọdụ) ọrụ afọ a dị afọ ikpeazụ 6-8 gara ọtụtụ French ụlọ ọrụ dị na Eurasia Okporo ígwè ngosi nke ga-ẹkenịmde n'etiti March na-ahazi a mba guzoro. Mba nke mba French guzoro na Hol9-Stant ga-adị na A10. Site na injin akụrụngwa gaa usoro ụzọ njem nwere ọgụgụ isi; ụgbọ ala ụgbọ okporo ígwè, okporo ụzọ ụgbọ okporo ígwè / okporo ụzọ; E nwere ọtụtụ ụlọ ọrụ dị n'ọhịa, site na ígwè ọrụ na akụkụ ndị ọzọ maka njem ụgbọ okporo ígwè na usoro ntinye ụgbọ okporo ígwè maka ịkwado ụgbọ ala okporo ígwè.
Eurasia Rail iji malite 2015 Doors na March 5 30 / 09 / 2014 Eurasia Okporo ígwè Ngosi opener March xnumx't ka xnumx.kez ụzọ: n'etiti March 2015 5-05 akụkọ ihe mere eme, Istanbul Expo Center na Yesilkoy, Turkel Fair Organization Inc. nke ga-n'out oge haziri nzukọ na nzukọ ọmụmụ International Eurasia Okporo ígwè okporo ígwè, Light Okporo ígwè Systems, ngụda amalitela maka Infrastructure na lọjistik Fair. Na 07, 2015 2014 na-enye ohere na òkè nke sịrị si mba dị iche iche na site dị iche iche mba 25 300 'oru ọkachamara gara ngosi oke nke ọzọ ụlọ ọrụ Refeyim ama malitere ha. N'ihi mmụgharị ọ bụla a na - enweta n'afọ ọ bụla, a na - anabata mmasị ahụ n'ụzọ dị mma; Turkey na ụwa nakwa dị ka ọha oru Kardemir, na UN ígwè, ewusiri ike ...
CYF International ọzọ na Eurasia Rail 2017 28 / 02 / 2017 International CYF International ọzọ na Eurasia Rail 2017 Fair: CYF International, nke Fazlı Çitli, na-ekere òkè na Ụlọ Ọrụ okporo ígwè nke afọ a dịka ọ na-eme kwa afọ. A ga-emeghe CYF na 2-4 March na Istanbul Expo Center. 2 Eurasia Rail ga-anọ na Ụlọ Nzukọ 2017 - 9 na Eurasia Rail. Fazlı Çitli kwuru na ha bụ naanị ụlọ ọrụ na-anọchite anya Çorum na mma ma sị, uk Ụlọ ọrụ anyị, nke na-egbo mkpa nke ụgbọ okporo ígwè ụwa na ndị na-ere ngwaahịa ma na-eme ka mmekọrịta dị mma, dịka mgbe niile Ç
Konya na-akwado Eurasia Rail 2020 11 / 09 / 2019 Konya, nke na-aga n’ihu n’ike n’ike ịbụ obodo nke na-ezighi ezi, bụ 2020 ụwa zuru ụwa ọnụ na 3. Uragbọ okporo Eurasia, nke bụ ụlọ ngosi kachasị ụgbọ okporo ígwè, ndị Konya Metropolitan Obodo ga-akwado. 9. ỌR RE EKPERE EGO Esiasia, nke a maara dị ka otu n'ime nnukwu oriri na mpaghara Eurasia na otu n'ime nnukwu ụlọ ọrụ ụwa maka mpaghara usoro ụgbọ okporo ígwè, ga-akpọkọta ndị kacha mkpa nke ngalaba usoro ụgbọ okporo ígwè na Konya. E gosiputara ngosi a, nke Istanbul, Ankara na Izmir gara aga, bụ 9. Mmiri ga-abụ ndị Konya Metropolitan Obodo ga-elekọta. Ngosiputa bu ihe ejikere ime n’onwa mbu nke 2020; Kemgbe 2011, ogwe nke mpaghara na Eurasia…
2014 na 2 Eurasia Rail. ugboro French French Stand
Eurasia Rail iji malite 2015 Doors na March 5
Konya na-akwado Eurasia Rail 2020
Switzerland ga-egosi òkè mba na nke mbụ na Eurasia Raile
Ụlọ ọrụ buru ibu na-ezukọ na Eurasia Rail Fair ka a ga-enwe na Istanbul
Ụzọ Mbụ Na-aga n'Ụlọ Eurasia
TÜVAŞAŞ mepere ogige na Eurasia Rail Fair.